UBuyiselo olutsha kuKhenketho lwase-Italiya ukuya kwi-1 yebhiliyoni ye-Euro
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-Itali eziQhekezayo » UBuyiselo olutsha kuKhenketho lwase-Italiya ukuya kwi-1 yebhiliyoni ye-Euro
Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zase-Itali eziQhekezayo • iindaba • Ukwakha kwakhona • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
I-1 yebhiliyoni ye-Euro yokuBuyisa uKhenketho lwase-Italiya
Iqela lebhanki lamazwe ngamazwe lase-Italiya le-Intesa Sanpaolo lenze i-1 yeebhiliyoni zee-euro ezifumanekayo ukuxhasa ukubuyiswa kwamashishini amancinci naphakathi kwicandelo lezokhenketho. Ikhuthaza utyalo-mali oluya kwicala lokhenketho oluzinzileyo, ngokuhambelana nendlela yeSicwangciso seSizwe sokuBuyisa nokuBuyisela (PNRR).
Eli nyathelo, ngokubambisana ne-Sace, iqumrhu likarhulumente elisebenza ekuthengiseni iinkampani kumazwe ngamazwe, linyathelo lokuqala elithe ngqo SMEs (iinkampani ezincinci neziphakathi) kwicandelo njengenxalenye yenkqubo yeqhinga lemoto yaseItali. Isicwangciso sotyalo-mali seziko letyala, sibonelela ngobonelelo lwezibonelelo ezongezelelweyo kwi-120 yeebhiliyoni, kulo nyaka sisungulwe ngesilingi yeebhiliyoni ezingama-50, eziya kuncedisana nemali ebonelelwe yi-NRP yokusungulwa ngokutsha kwelizwe. Ngokukodwa amacandelo edijithali, inguqu yendalo, ukushukumiseka okuzinzileyo, imfundo kunye nophando, ubandakanyo kunye nobumbano, kunye nempilo zijoliswa kuzo.
Ungenelelo lwenkxaso olubhengezwe liqela leebhanki elikhokelwa nguCarlo Messina liza kuxhasa ngemali ii-SMEs kwicandelo ikakhulu kwiindawo ezi-3: ukuphuculwa nokunyusa umgangatho wemigangatho yeendawo zokuhlala, ukuzinza kokusingqongileyo kwesi sibonelelo, kunye nedijithali. Amanyathelo abonelelwe ngumthetho wommiselo 43 onxulumene nemilinganiselo ye-PNRR yoKhenketho nayo iya kuhlanganiswa kwinyathelo.
Kukho izisombululo zenkxaso-mali ezi-2 eziqulunqwe kulo mxholo. Eyokuqala yi-Suite Loan, eyenzelwe iinkampani zokhenketho ezifuna ukujolisa umgangatho wendawo yazo yokuhlala. Okwesibini yi-S-Loan Turismo, ejolise ekukhuthazeni utyalo-mali olujoliswe ekuphuhliseni ngokutsha kunye namandla amaziko ehotele.
Sele ngo-2020, i-Intesa Sanpaolo ixhase iinkampani zokhenketho ngokumisa ukumiswa kweemali-mboleko ezingama-70,000 ngexabiso le-8 yeebhiliyoni kunye nokuhlawula iibhiliyoni zezimali ezintsha ngeemveliso ezinikezelweyo.
“Ukhenketho ngokungenakuthintelwa lelinye lamacandelo achaphazeleka kakhulu ngubhubhane. Kwasekuqaleni, sinike inkxaso yethu ngokwenza i-2 yeebhiliyoni zee-euro ukuba ifumaneke ukuhlangabezana neemfuno zangoku zenkampani, utshilo uStefano Barrese, intloko yeBhanki yeCandelo leTerritories yeZiko.
Iimpendulo ezincomekayo kweli nyathelo nazo zabhalwa ngabameli be icandelo lezokhenketho. “Ungenelelo olutsha olubhengezwe ngu-Intesa Sanpaolo luza kuvumela amashishini amancinci naphakathi kwicandelo lezokhenketho ukuba ahambe nolu tshintsho. Siyayibulela intonga yokuvuma kuka-Intesa Sanpaolo ukuxhasa uhlengahlengiso lweehotele zase-Italiya,” wabalaselisa uMongameli waseFederalberghi, uBernabò Bocca.
NgokukaMaria Carmela Colaiacovo, uMongameli woMbutho wase-Italiya weehotele zaseConfindustria, "Iphakheji yongenelelo echongiweyo ilungelelaniswe kakuhle kwicandelo."
"Inkxaso yecandelo le-spa [kwakhona] ivela kwi-Intesa Sanpaolo," wongeze watsho uMassimo Caputi, uMongameli weFederterme Confindustria.